PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - Uyofundela ubudokotela obelusa izinkomo
Uyofundela ubudokotela obelusa izinkomo
UYOKWENZA izifundo zobudokotela eNyuvesi yaKwaZulu-Natal umfundi waseMavela High oPhondweni eJozini okhule elusa izinkomo ehamba nebanga elide uma eya noma ebuya esikoleni.
UBongumenzi Simelane (17) umenyezelwe nabanye abafundi abaphase ngamalengiso yize bebefunda ngaphansi kwengcindezi. Ubonga uyise owamyekisa ukwelusa izinkomo, wathi abhekane nezincwadi kuphela ekuqaleni konyaka.
Uthole o-A abahlanu kwi-Maths, Physical Science, Life Science, Life Orientation, IsiZulu no-B kwiAgricultural Science ne-English.
Umcimbi wokumenyezelwa kwemiphumela ka-matric 2016 obuseICC eThekwini umthokozise kakhulu njengoba nomyalezo wokuthi isicelo sakhe sasenyuvesi samukeliwe ungene ekhona.
“Ukuthola lo myalezo ngilana kungithokozisile. Nasekhaya bazojabula uma sebezwa ukuthi ngiyofundela ukuba ngudokotela. Kuzobe kuqala ngami ekhaya ukuthi kube khona udokotela,” kusho uBongumenzi.
Uyise uMnuz Andries Simelane (57) uthe yize yena engasiqedanga isikole kodwa ubenza isiqiniseko sokuthi izingane zakhe ziyafunda.
“Ngibubonile ubunzima bokungafundi, angifunanga ukuthi izingane zami zibe njengami. Uzoba yingane yesithathu ukuya enyuvesi, ezimbili zaya kosebenza emuva kukamatric. Ngamyekisa ngisho ukwelusa izinkomo ngoba ngangingafuni ukuthi kube khona acasha ngakho uma engenzanga kahle ezifundweni zakhe. Siyaziqhenya ngaye,” kusho uSimelane.
Uqhube wathi: “Umntwana ungamxini ngemisebenzi yasekhaya ukuze akwazi ukubhekana nezincwadi. Lezi zingane yizona ezizoshitsha impilo yethu. Sibakhulise sipatanisa kodwa sabekezela,” kusho uSimelane.
Khonamanjalo umfundi waseSiyangempumelelo High KwaCeza, uMthokozisi Khumalo (20) othole o-A abahlanu no-B ababili uthe into yokuqala azoyeza uma esesebenza ukwakhela unina umuzi njengoba sekuphele iminyaka behlala endlini yodaka ehlala ngokudilika.
“Ngibonga nothisha esikoleni abakwazi ukungivulela izandla bangilekelele nasezimalini ngenxa yokwazi isimo sasekhaya. Akukho okudlula ukuzimisela nokubekezela empilweni,” kusho uMthokozisi.
UNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Mthandeni Dlungwana, uthe uyaziqhenya ngezifunda zasemakhaya ngemiphumela yazo emihle yize zisasalele ngemuva kwintuthuko.